के एउटा हात्ती गरेको दाँत हामीलाई विकास बारे सिकाउँछ - समाचार नियम
के एउटा हात्ती गरेको दाँत हामीलाई विकास बारे सिकाउँछ
कि विकासवादी परिवर्तन प्रमाणित गर्न होइन जीन तल सधैं छ, बस एक हात्ती मुखबाट खोल्न ...
शीर्षक यो लेख “के एउटा हात्ती गरेको दाँत हामीलाई विकास बारे सिकाउँछ” एलिस रॉबर्ट्स द्वारा लेखिएको थियो, मा आइतबार 31 जनवरी दर्शक लागि 2016 07.00 UTC
धेरै पहिले, सायद पनि समय को मनाइन्छ mists अघि, त्यहाँ अफ्रीका बस्थे जनावरहरूको ठूलो परिवार थियो. कथा केही सुरु 10 लाख वर्ष पहिले र त्यसपछि परिवार भयो र बाहिर फैलाउन. वरिपरि तीन लाख वर्ष पहिले, यो एक शाखा युरोप र एशिया मा गिरा. जनावरहरू नयाँ क्षेत्रहरू मा सारियो रूपमा, तिनीहरूले थप उत्तरी climes गर्न छाँटकाँट. अन्ततः, केही Beringia को पुल पार, उत्तर अमेरिका मा उत्तर-पूर्वी एशिया देखि स्थानन्तरण.
यो एक परिचित कथा सुनिन्छ. को र Pliocene मा अफ्रिकी मूल - पक्कै पनि यो हाम्रा पुर्खाहरूले बारेमा सबै छ, प्रमुख जीवाश्म केन्यामा पुरातन sediments देखि देखिने संग; केही यो समूह युरोप र एशिया colonizing को; नयाँ संसारमा मार्च. तर यो hominins को कथा छैन: australopithecines को, paranthropines र होमो. यो elephantines को कथा छ: mammoths को, Loxodonta र Elephas.
यो हात्ती गरेको दांत को कथा तरिका फरक छ, व्यवहार परिवर्तन स्पष्ट शरीर रचनाको विज्ञान मा परिवर्तन precedes
जीवित हात्ती सबैभन्दा हडताली विशेषताहरु - चड्डी र tusks - आफ्नो gomphothere पुर्खाहरूको मा देखा थियो 20 लाख वर्ष पहिले. छोटो घाँटी संग एक ठूलो जनावर लागि, ट्रंक एक अत्यन्तै उपयोगी विकास थियो, पात बुझ्न र मुख तिनीहरूलाई ल्याउन यी proboscideans अनुमति, यसरी एक विकासवादी फाइदा प्रदान.
ट्रंक र tusks मा incisors को परिवर्तन को विकास खोपडी को आकार मा परिवर्तन सँगसँगै थिए. भित्र मुख, दाँत पनि परिवर्तन थिए. छोटो चिबुक molars को एक पूरा सेट लागि सानो कोठा बाँकी, जबकि दाँत भारी पहनने को एक लामो जीवनकालमा गरेको लायक धान्न सक्षम हुन आवश्यक. विकास दुवै समस्या एक चिटिक्क समाधान प्रदान. बरु पूर्वदाढ र molars एकै समयमा मुख मा crammed को एक पुरा सेट भएको भन्दा - आफ्नो मुखमा रूपमा - त्यहाँ बस एक थियो, ठूलो दाँत कुनै पनि समयमा माथिल्लो र तल्लो चिबुक को प्रत्येक पक्ष कब्जा. यो दाँत तल लगाएका रूपमा, अर्को यो पछि बढ्दै थियो, यस थकित-बाहिर दाँत बाहिर गिर जब ठाउँ ढल्क्यौं तयार, एक जीवनकालमा दाँत को अप गर्न छ सेट संग पशु प्रदान.
एक gomphotherium को कलाकार गरेको छाप, यो हात्ती को चार-tusked पुर्खा, र यसको सन्तान. तस्वीर: Alamy
जीवाश्म gomphotheres र हात्ती को दाँत आफ्नो आहार को एक संकेत संरक्षण. दांत तामचीनी कार्बन विभिन्न आइसोटपहेर्नुहोस् को अनुपात एक विशेष व्यक्ति पात ब्राउजिङ वा घाँस खाने थप ध्यान थियो कि देखाउँछ. अफ्रीका को grasslands पहिलो वरिपरि फैलाउन थाले 10 लाख वर्ष पहिले र आइसोटप विश्लेषण लेट gomphotheres र प्रारम्भिक हात्ती आठ लाख वर्ष पहिले वरिपरि घाँस मुख्य रूप खाने गर्न सरेका भनेर प्रकट गर्छ. मा हात्ती, यो स्विच आफ्नो चबाने दाँत अर्को परिवर्तन प्रतिबिम्बित छ, जो अग्लो रूपमा तीन पटक भयो, तामचीनी ridges एक proliferation संग. तर यी एक घर्षण आहार गर्न अनुकूलता वरिपरि पाँच लाख वर्ष पहिले देखा, नरम पात बाट कठिन घास कि स्विच पछि तीन लाख वर्ष. संकल्प को डिग्री संग हामी टाढा फिर्ता विगतमा हेर्दै गर्दा प्राप्त गर्न सक्छन्, यो पहिलो आए के थाहा गर्न अक्सर गाह्रो छ - व्यवहार वा शरीर रचनाको विज्ञान मा परिवर्तन. तर यो मामला मा, यो धेरै स्पष्ट छ: दाँत परिवर्तन आहार मा परिवर्तन पछि वर्ष लाखौं lagged.
हाम्रो विकासवादी narratives मा, यो जीव नै अक्सर एक निष्क्रिय भूमिका खेल्ने देखिन्छ: एक शक्तिहीन शिकार, लगभग, यसको जीन यसको वातावरण परिवर्तन वा उत्परिवर्तन को. तर हात्ती गरेको दाँत को कथा तरिका फरक छ, व्यवहार परिवर्तन स्पष्ट शरीर रचनाको विज्ञान मा परिवर्तन precedes (र दाँत विकासका लागि जन्माउने आनुवंशिक निर्देशन). सायद हामी यो द्वारा हैरानी गर्नुपर्छ: विकास plasticity जनावरको शरीर को अन्तिम आकार मात्र होइन बाह्य कारक द्वारा डीएनए द्वारा तर पनि निर्धारण गरिन्छ भन्ने हो. र जनावर हामी कहिलेकाहीं मान भन्दा तिनीहरूले वातावरण अन्तरक्रिया बाटो मा थप लचिलो छन्. रूपमा हात्ती देखाउन, विकास मा नवीनता स्रोत व्यवहार देखि भन्दा जीन देखि आउन सक्छ.
एक अफ्रिकी हात्ती खोपडी मा दाँत. तस्वीर: अफ्रीका Photobank / Alamy छविहरू
यो केवल सम्भव छ कि परिवर्तन यस प्रकार, व्यवहार परिवर्तन संग उद्भव, मानव विकास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका. लाख वरिपरि दुई वर्ष पहिले, त्यहाँ शरीर आकार मा एक ठूलो पारी छोटो खुट्टा टाढा थियो, जो पहिलो देखा होमो erectus. यो नयाँ anatomical सुविधाहरू धेरै संभावना छ, बढेको gluteal मांसपेशीमा र chunkier achilles tendons गर्न अब खुट्टा देखि, चालु बढेको दक्षता सम्बन्धित छन्. मानिसहरू एक समूह नियमित सञ्चालन गर्न थाले भने, शिकार वा अझ प्रभावकारी मांजना गर्न सायद तिनीहरूलाई अनुमति, anatomical परिवर्तन पालना थियो, विशेष गरी अझै-विकास जवानहरूले बीचमा. एकपटक चलिरहेको व्यवहार को एक महत्वपूर्ण भाग भए, यसलाई उन्नत कुनै पनि उत्परिवर्तन इष्ट हुनेछ. तर नवीनता को वास्तविक स्रोत, सायद, व्यवहार मा कि परिवर्तन र एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन थियो.
हाम्रो आफ्नै पुर्खाहरूको विकासवादी नवीनता सधैं जीन मा Originate छैन भनेर हामीलाई सम्झाउने विकसित जहाँ अफ्रिकी परिदृश्य roamed कि ठूलो proboscideans.
49827	1 एलिस रॉबर्ट्स, पशु, लेख, जीवविज्ञान, पत्ता लगाउनुहोस्, विकास, विशेषताहरु, विज्ञान, नयाँ समीक्षा, यो दर्शक
← किन र Oysters मोती कसरी तपाईं Windows चलान गर्न सक्दैन 95 भित्र तपाईंको ब्राउजर अब [PcWorld] →